Guardians Tales no "tsiambaratelon'ny Mana" ho an'ny Android | Androidsis
Guardians Tales dia RPG RPG tanteraka amin'ny teny espaniola
Raha mitady karazana RPG Tsiambaratelon'ny Mana ianao dia tsara vintana satria mandritra ny herinandro vitsivitsy dia ao amin'ny Play Store no mahaliana Guardians Tales, lalao maimaim-poana hahafahantsika mamantatra ny mombamomba azy rehetra ary mikasa ny ho amin'ny Espaniôla.
Mampiavaka ny zavakanto pixel lehibe, ary izay mampiavaka ny volavolan'ny toetran'izy ireo, dia napetrak'izy ireo ihany koa ny famaranana ny haavon'ny ambaratonga izay tsy ratsy velively ary ahitantsika andiana piozila hanohizana ary hahita miafina aza ambaratonga. Ataovy.
1 RPG mipoaka tampoka
2 Puzzles, boss farany ary fanatsarana ny maherifonao amin'ny Guardians Tales
3 PvP mahery mba tsy hisy tsy hita
RPG mipoaka tampoka
Raha mandeha amin'ny tantaran'ny Lalao Kakao Games isika, ny fanadihadiana miandraikitra ny famoahana ny Guardians Tales, dia mahita lalao izay tsy misy ifandraisany amin'izany isika. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy afaka miresaka tantara iray mametraka ny fototr'izany isika mihaona amin'ity vatosoa kely ity avela hilalao hatramin'ny fotoana voalohany nametrahantsika ny rantsan-tànantsika teo amin'ny efijery mikasika ny finday.
Guardians Tales dia RPG hetsika izay hitondrantsika ny mpandray anjara mavitrika hanafika mivantana ireo fahavalo ary amin'izay ny zava-mitranga dia eo alohantsika rehetra nefa tsy miandry fihodinana na mandeha amin'ny efijery hafa fotsiny isika. Noho izany dia manomboka ny haavony isika ary hanana ny piozila, mekanika, fihaonana ary fahavalo ao anatiny.
Amin'ity fivoarana ity izay toa ny RPG tsirairay avy dia miorina amin'ny ady mifandimbiasana ary na dia mandeha ho azy aza ny Guardians Tales feat mandraka androany ary antenaina fa misy studio bebe kokoa hamerina ny filalaovany; tsy noforonina mihitsy ary ny Tsiambaratelo lehibe an'i Mana dia nahavita tsara tamin'ny fiandohan'ny taona 90.
Puzzles, boss farany ary fanatsarana ny maherifonao amin'ny Guardians Tales
Toy ilay voalaza etsy aloha, tsy maintsy hanao izany isika miatrika ny vahaolana amin'ny Puzzles isan-karazany amin'ny mekanika. Miresaka momba ny fanongotana vatolampy mavesatra isika, fanipazana baomba mipoaka na fampiasana vilany afo handoroana haingon-trano sasany. Misy karazany maro be amin'ireny fotoana ireny ary hahafahantsika mankafy an'io RPG io ankoatry ny hetsika ady.
Miaraka io ady io bokotra fihetsika hampiasana ny sabatray ary iray hafa ho an'ny hery manokana an'ny maherifo lehibe. Herinaratra izay hiasa amin'ny ondrilahy manohitra ny vatolampy lehibe koa ary ireo dia azo ravana mba hanohizana ny lalana.
Ny ady atao amin'ny tena izy dia midika izany mila mitandrina isika mba hihetsika haingana. Archero kely, na dia misy ny tsy fitovizany satria lalao RPG fa tsy arcade loatra. Na izany aza dia mahatonga antsika hihaino tsara ny ompa'ny fahavalo handroso.
PvP mahery mba tsy hisy tsy hita
Ary ankoatry ny fahafahany manatsara ny maherifontsika ho RPG mendrika mendrika ny sira, dia tsy te handao ny PVP koa izy ireo. Tsy maintsy manangona ny anao ianao vondrona tsara indrindra misy mahery fo 3 hiatrika mpilalao hafa amin'ny ady amin'ny fotoana tena izy. Volom-borona amin'ny mofomamy misy ny Guardians Tales tenany ary avy eto dia mamporisika anao ankafizinay ianao hankafizinao.
Ary tsy manadino ny nosy manokana ahafahanao manangana singa vitsivitsy izay manohy manandratra ny hatsaran-toetran'ity RPG ity. Ny trano pancake iray sy ny cirque dia ohatra sasantsasany amin'izany fifandraisana ara-tsosialy kokoa an'ny Guardians Tales ary tsy ananan'ireo guilds koa mba hiarahana amin'ny namana.
Raha ara-teknika dia a lalao feno hatsaran-toetra ary tavela amin'ny mekanika lalao isika rehefa miatrika ny piozila. Toy izany dia manana famolavolana toetra tena tsara na amin'ny ratsy na amin'ny ratsy. Ny marina dia eto izy ireo dia nahafantatra ny fomba filalaovany tsara ny karany hahafahany miaina traikefa tena tsara amin'ny lalao.
Raha fintinina, inona Guardians Tales dia hetsika RPG izay nahazo fanamarihana an'arivony afaka herinandro. Raha mbola manana fialantsasatra vitsivitsy sisa ianao ka maniry zavatra hafa, aza hadino ny zavatra niainany. Azonao atao ihany koa ny manana fotoana ho an'ny RPG hafa toa Romancing SaGa.
Raha tsy maintsy nitady lalao nitovy tamin'ny tsiambaratelon'ny Mana miafina isika dia ity no izy. Voalaza ny zava-drehetra.
Asa maso tsara ho an'ny traikefa kanto pixel
Mitandrema tsara ny ankamantatra sy ny haavo
Fanandramana lehibe amin'ny ankapobeny
Angamba mety ho betsaka kokoa ny haavony
Developer: Ny orinasa Kakao Games Corp.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Guardians Tales dia RPG RPG tanteraka amin'ny teny espaniola
Huawei smartphone miaraka amin'ny serivisy Google dia hitsahatra tsy handray fanavaozana vaovao
iQOO 5 sy iQOO 5 Pro, ny farany ambony roa vaovao efa natomboka tamin'ny fampisehoana 120 Hz sy famandrihana haingana 120 W